သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - သတင်းရွာ
သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေက သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာမှ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးချလို့ရတဲ့နေရာမှာ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူများနေ့လေးမှာ တကယ်ကိုမွန်မြတ်လှတဲ့အလှူအတန်းလေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါတွေကိုလည်း သူမရဲ့ ချစ်ရသူက တိုက်တွန်းပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေဟာ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်တိုက်လုပ်လာခဲ့ပြီး ချို့တဲ့နေတဲ့ မိသားစုဘဝလေးတွေကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ အထောက်အပံ့တွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆိုရင် ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာကို တည်ထောင်ထားပြီး စွန့်ပစ်ကလေးငယ် မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကို မိဘအရင်းသဖွယ် ရင်နှင့်အမျှ မေတ္တာတွေအပြည့်အဝပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာကြီးဆက်လက်တည်မြဲနေစေဖို့အတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေက ဒီနေ့လို ချစ်သူများနေ့မှာ သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့နေရာမှာအသုံးချစေဖို့အတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်မှာသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ချစ်သူများနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးအယောက် ၁၉၈ ယောက်ကိုလည်း ချောကလက်လေးတွေ ကျွေးပြီးအလှူလုပ်ခဲ့သေးတဲ့အကြောင်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ယခုလိုပဲ မျှဝေလာပါတယ်။
“၁၄,၂,၂၀၂၀ မှာ ပထမဦးစွာ ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်..ခန္ဓာကိုယ်သွားလှူတဲ့အခါ မိမိသေပြီးတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အများအကျိုးအတွက် ဆေးပညာအထောက်အကူဖြစ်ဖို့..
ကိုယ့်နိုင်ငံဆေးပညာတိုးတက်ဖို့အတွက် ပညာဒါနလဲမြောက်အောင် နှင့် မိမိ မှာ ငွေကြေးမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ သွေး.ခန္ဓာ. မျက်ကြည်လွှာ. လှူလို့ရတာ အကုန်လှူပြီး ကုသိုလ်ယူချင်လို့ လှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်.ဒုတိယ အလှူကတော့ မျက်မမြင်ကလေးများ ၁၉၈ ယောက်ကို VD ချော့ကလက်လေးတွေပေးရင်း. ရေဗူးလေးများဝေခဲ့ပါတယ်..
မျက်မမြင်ကလေးများအတွက် အသံဒါန ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်..ဒါကတော့ မျက်မမြင်ကလေးများ စာမဖတ်နိုင် မမြင်ရတဲ့အတွက် စာဖတ်ပြရင်း ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်. ဒီနေ့လေးကို ထူးထူးခြားခြား ကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းဖို့ ဘေးကတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့ သူ့ ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
တကယ်ကိုမွန်မြတ်လှတဲ့အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေသာမက ဒီလိုအလှူတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ ဘေးကတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့သူပါမကျန် ကုသိုလ်ထူးတွေ ရရှိပြီးတော့ လျှောက်ရမယ့်အနာဂတ်လမ်းခရီး ပိုမိုဖြောင့်ဖြူးသာယာနိုင်ပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Cele Star
သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝကေ သဆေုံးသှားတဲ့အခါ ဘယျနရောမှာမှ အသုံးမဝငျတော့တဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အသုံးခလြို့ရတဲ့နရောမှာ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ခဈြသူမြားနလေ့ေးမှာ တကယျကိုမှနျမွတျလှတဲ့အလှူအတနျးလေးပွုလုပျခဲ့တာပါ။ ဒါတှကေိုလညျး သူမရဲ့ ခဈြရသူက တိုကျတှနျးပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝဟော လူမှုကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှကေို ဆကျတိုကျလုပျလာခဲ့ပွီး ခြို့တဲ့နတေဲ့ မိသားစုဘဝလေးတှကေိုလညျး တဈဖကျတဈလှမျးကနေ အထောကျအပံ့တှပေေးနတောဖွဈပါတယျ။
ယခုဆိုရငျ ခိုငျနှငျးဝေ ရငျသှေးလေးမြားဂဟောကို တညျထောငျထားပွီး စှနျ့ပဈကလေးငယျ မိဘမဲ့ကလေးငယျတှကေို မိဘအရငျးသဖှယျ ရငျနှငျ့အမြှ မတ်ေတာတှအေပွညျ့အဝပေးနတောဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး သူမရဲ့ ဂဟောကွီးဆကျလကျတညျမွဲနစေဖေို့အတှကျ လှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျကွပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေ ဒီနလေို့ ခဈြသူမြားနမှေ့ာ သဆေုံးသှားတဲ့အခါ အသုံးမဝငျတော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အသုံးဝငျတဲ့နရောမှာအသုံးခစြဖေို့အတှကျ ဆေးတက်ကသိုလျမှာသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခဈြသူမြားနဖွေ့ဈတဲ့အတှကျ ကလေးအယောကျ ၁၉၈ ယောကျကိုလညျး ခြောကလကျလေးတှေ ကြှေးပွီးအလှူလုပျခဲ့သေးတဲ့အကွောငျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါကနေ ယခုလိုပဲ မြှဝလောပါတယျ။
“၁၄,၂,၂၀၂၀ မှာ ပထမဦးစှာ ကမြရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကို လှူဒါနျးခွငျးဖွဈပါတယျ..ခန်ဓာကိုယျသှားလှူတဲ့အခါ မိမိသပွေီးတဲ့အခါ အသုံးမဝငျတော့တဲ့ ဒီခန်ဓာကိုယျကွီးကို အမြားအကြိုးအတှကျ ဆေးပညာအထောကျအကူဖွဈဖို့..
ကိုယျ့နိုငျငံဆေးပညာတိုးတကျဖို့အတှကျ ပညာဒါနလဲမွောကျအောငျ နှငျ့ မိမိ မှာ ငှကွေေးမှမဟုတျဘူး ကိုယျ့ရဲ့ သှေး.ခန်ဓာ. မကျြကွညျလှာ. လှူလို့ရတာ အကုနျလှူပွီး ကုသိုလျယူခငျြလို့ လှူခွငျးဖွဈပါတယျ.ဒုတိယ အလှူကတော့ မကျြမမွငျကလေးမြား ၁၉၈ ယောကျကို VD ခြော့ကလကျလေးတှပေေးရငျး. ရဗေူးလေးမြားဝခေဲ့ပါတယျ..
မကျြမမွငျကလေးမြားအတှကျ အသံဒါန ကုသိုလျယူခဲ့ပါတယျ..ဒါကတော့ မကျြမမွငျကလေးမြား စာမဖတျနိုငျ မမွငျရတဲ့အတှကျ စာဖတျပွရငျး ကုသိုလျယူခဲ့ပါတယျ. ဒီနလေ့ေးကို ထူးထူးခွားခွား ကုသိုလျလေးတှနေဲ့ ဖွတျသနျးဖို့ ဘေးကတိုကျတှနျးပေးနတေဲ့ သူ့ ကိုလဲကြေးဇူးတငျပါတယျ”
တကယျကိုမှနျမွတျလှတဲ့အလှူအတနျးတှေ ပွုလုပျနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝသောမက ဒီလိုအလှူတှကေိုပွုလုပျဖို့ ဘေးကတိုကျတှနျးပေးနတေဲ့သူပါမကနျြ ကုသိုလျထူးတှေ ရရှိပွီးတော့ လြှောကျရမယျ့အနာဂတျလမျးခရီး ပိုမိုဖွောငျ့ဖွူးသာယာနိုငျပါစလေို့ ပရိသတျကွီးနဲ့အတူ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။Cele Star
သူ့ကိုပျော်စေချင်တာလဲ အချစ်ပါပဲဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ဂိမ်းဆော့ရင်း စကားဆန်းဆန်းတွေနဲ့ အရွှန်းဖောက်စနောက်နေကြတဲ့ ခင်လှိုင်တို့မိသားစု